राजनीतिक विश्लेषण | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Mon, 08/08/2016 - 09:35
आजको यस घडीमा मैले अहिले सर्वसाधारण आम नेपालीजनताको प्रतिनिधि भएर जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले हाम्रो देश नेपालको प्रगतीका लागि निम्नलिखित अत्यावश्यक केही सल्लाह सुझावहरु तपाईंले नेपालको नेतृत्त्व सम्हालि रहनुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएको नाताले पेश गरेको छु ।
Mohan Moon — Wed, 02/17/2016 - 05:32
Biju Subedi — Tue, 01/05/2016 - 22:50
भूकम्प पीडितहरु आजसम्म पनि पाल मुनि राहतको आशामा विताइरहेका छन् । यस्तैमा धुर्मुस र सुन्तली जस्ता कलाकारहरुले थुप्रै भूकम्प पीडितहरुलाई टहरा बनाएर सुम्पिसकेका छन् । यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने धुर्मुस र सुन्तलीजस्ता कलाकारहरुलाई गाँस बासको समस्या नपरे पनि उनीहरुले थुप्रै टहरा बनाएर पडितहरुलाई सघाए । यो सहयोग त्यही भूकमपमा भत्किएर उब्रेका निर्माण साग्रीका सरसामानबाट पुनर्निमाण गरेका हुन् । तर पीडितहरुमा भने यस्तो जोश, जाँगर र आँट पलाएन । उनीहरु मुख ताक्दै बसिरहे । यदि उनीहरु पनि समस्यासँग जुझ्न तम्सने हो भने धुर्मुस र सुन्तलीले भन्दा राम्ररी जोहो गर्न सक्थे तर दुखःको कुरा , यस्तो पीडत पक
तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउने जोहो गरोस् ।
Biju Subedi — Tue, 12/01/2015 - 22:14
अहिलेको अवस्थामा भारतले तीन बाली उत्पादन गर्नुहुने तराईको उर्वर भूमिमाथि आँखा गाडेर र्याल चुहाइरहेको छ । उसले कसरी हुन्छ तराईलाई आफ्नो भू–भाग बनाउनमा कुटनीतिक चाल चलिरहेको छ । हुनत भारतीय सदनमा आज मोदी सरकारको विरोधमा नेपाललाई नाकाबन्दी नगर्न बहुमतले ठूलै दबाब दिएको समाचार आएको छ । तर हाम्रा कधेसी नेताहरुमा नेपालभक्तिको त्यस्तो चेत अझैसम्म पनि पलाएको देखिएको छैन । हाम्रा मधेसी नेताहरुको भारतपरस्त विचारले झन् मोदी नेतृत्व सरकारलाई हौस्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार भने अझै पनि विभिन्न बहानामा भारतबाट इन्धन ल्याउँदा पाउने कमिशनको आश गरी जिब्रो लेब्र्याउँदै बसिरहेका छन् । हाम्रो देशक
Biju Subedi — Sun, 11/22/2015 - 22:21
आजले नाकाबन्दी भएको २ महिना र मधेसमा आन्दोलन भएको १०० दिन पूरा भइसकेको छ । तर यत्तिबेलासम्म पनि सत्तापक्ष र आन्दोलनरत पक्ष बीच निष्कर्ष सहितको सम्झौता हुन सकेको छैन । एकातिर मधेसी दलहरू सबैको साझा धारणा बनेको छैन भने सत्ताधारीहरूको पनि एकमत भएको छैन । यो पनि जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनुको प्रमुख कारक हो ।
Biju Subedi — Fri, 11/13/2015 - 22:33
भारत आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्छ , नेपालको स्वार्थलाई कहिल्यै हेरेन । भारतको २ प्रतिशत ब्यापार मात्रै नेपालको ८० प्रतिशत ब्यापार बराबर छ र यत्ति नै ब्यापारमा नेपाल भारतमा मात्रै निर्भर छ । ४५ साल र त्यो भन्दा पहिले पनि पटक–पटक नेपालभन्दा २३ गुणा ठूलो भारतले नेपाललाई नाकाबन्दीले धेरै धेरै कष्ट दिएको थियो तर पनि नचेतेकोले गर्दा आज देशले यो दुरावस्था झेल्नु पर्यो । नेपालका नेताहरु भारतले यस्तो अवस्था गर्ला भनेर पहिले–पहिले भारतको चम्चागिरी गर्ने गथ्र्यो र अझ भारतीय र सँग हाम्रो पार्टीको राम्रो सम्बन्ध छ त्यसैले हामीले सरकार चलाउँदा देशलाई फाइदा पुग्छ भनेर हाम्रो देशका सबै पार्टीहरुले यस्तो दाबी गर
editor — Sun, 08/09/2015 - 21:35
दोश्रो संविधानसभाको निर्णयबाट अब नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत भएको छ । यो एउटा अत्यन्त ठूलो र महत्वपूर्ण निर्णय हो जसलाई संविधान निर्माणको चरणमा बलपूर्वक राखिएको एउटा जवर्जस्त कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतका हिसावले जनताले संविधान निर्माणका लागि दिएको मतलाई आधार मान्दा ज्यादै ठूलो वहुमतले पारित गरेको निर्णय भन्न मिल्छ भने जनतालाई प्रत्यक्ष मतमा समावेश गराएर जनमत संग्रहको प्रकृया पुरा गराएको भए, सम्भवत प्रादेशिक राज्य व्यवस्था राजनीतीकर्मी वाहेक अन्य समुहका आम जनताको चासोको विषय देखिदैनथ्यो तर पनि यो एजेण्डा राष्ट्रले अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरिसकेको, देशमा माओवादी कालमा उठाइएका जातीय र प्रादेशिक अधिकार तथा क्षेत्रीयरुपमा किराँत, लिम्वु, मधेश, तामांग, गुरुङ्ग, मगर वाहुल्य क्षेत्रका जनताले राम्रैसँग मलजल गरेको र खास गरी मधेशी समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले सहादत गरेका र राज्यसँग संघ बनाउन सहमत गराई विभिन्न मितिहरूमा गरिएका सन्धि तथा सम्झौताहरूका कारण संघीय नेपाल अनपेक्षित निर्णय नभएर अपेक्षित निर्णय भएकाले राज्यसँग वा संविधान निर्माताहरूसँग प्रादेशिक राज्य बनाउनै पर्नै वाध्यता थियो ।
neruta moktan — Sat, 08/08/2015 - 22:06
अधिकार माग्नेलाई गोलि संविधान माग्नेलाई भोलि !! दश वर्षे जनयुद्धले गणतन्त्र ल्यायो एक छिन गनायो हरायो दश हजार सहिदको सपना दश दिन पनि टिकेनन् ।
puskal — Sat, 03/10/2012 - 12:27
संबिधानले शान्तिलाई लेखेको पत्रको एक अंश ः–
प्रिय शान्ति !
म तिम्रो उही संबिधान हुँ । चिन्यौ हैन ! तिम्रो बियोगमा म धेरै रोएँ । सायद तिमी पनि रोयौ होला, धेरै छट्पटायौ होला ? अझ म कति तड्पे हुँला ! तिमी अनुमान लगाउन पनि सक्दिनौ ।
होली र रङ्ग
Biju Subedi — Wed, 03/07/2012 - 07:38
धेरैलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि होली हाम्रो देशको सबैभन्दा पुरानो चाड मध्ये एक हो भनेर । काठमाण्डौंको वसन्तपुरमा होलीपूणिर्माको एक हप्ता अगाडि चीर ठड्याइसकेपछि औपचारिक रुपमा होली सप्ताह शुरु हुन्छ र आज हामी होलीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रङ्गाइमा व्यस्त छौं र होलीले पूणिर्माको भोलिपल्ट तराइका २१ जिल्लामा धुमधामको रुप लिन्छ भने पहाडका ५४ जिल्लामा पूणिर्माका दिन धुमधामको रुप लिन्छ । जसरी होलीको बेला मोजमस्ती गरिन्छ । नाचगान ढोल, मादर, मञ्जीरा, ध्रुपद, धमार होस् या खैंजडी आदिबाट, यसै प्रकारको मस्तीको बेफिक्री व्यञ्जन पनि यसको अभिन्न हिस्सा हो ।
minabantawa — Tue, 02/07/2012 - 17:05
अब संघियता भन्ने सब्द हटाएर हाम्रा कमरेडहरुले पनि जन संघर्षमा जाँदा यसरी बदलेर एक 'वार्गिय संघर्षता' नाम दिनु पर्यो र नेपालमा कुन सुटेड हुन्छ सुष्म तरिकाले हेर्नु पर्यो तर यहाँ ता उल्टो पो भै रहेछ झन् छुट्ने फुट्ने अरुले फाइदा लिने काम भै देश टुक्डा हुन् लागेको छ,
देशको अन्तिम खतरा आवस्थामा पुगेको छ यो खतरा बाट बचाउनु छ भने मेरो आग्रह छ सबैले सबै तर्फ बाट रोक्नु पर्यो, खबरदारी गर्नु पर्यो "हामी नेपाली हाम्रो एक सिंगो नेपाल"
Buddha Chemjong — Sat, 07/24/2010 - 09:45
हाम्रो देश नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषित भैसकेको परिस्थितिमा अझ पनि यही विषयमा संविधानविद सभासदहरू एक मतैक्य हुन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो देश संघीय रुपमा विभाजन गर्दा कुन रुपले र कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरू एक हुन सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक जमातमा संघीय गणतन्त्र गर्न हुन्न, नेपाल सानो देश, त्यो माथि जातीय बिखन्डन तर्फ जान्छ भन्ने समुह पनि सक्रिय छन् । नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्द लाग्नेहरू पहिलेदेखि नै गणतन्त्र र संघीयता कुरा गरेको सर्वबिदितै छ । आखिर राजा हटाउनलाई मात्र संघीय गणतन्त्रको नारा लिएर राजनीतिक पार्टीहरू मिलेका हुन् त त्यो बेला ? हरेक राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि भनेर मिलेर यो विकराल समस्यालाई चाडोभन्दा चाडो समाधान गर्नु पर्ने स्थिति छ । संक्रमण कालिन अबस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर जानु नै राम्रो देखिन्छ । अन्यथा यो समस्या ले धेरै ठुलो रुपमा बढेर जानेछ । एक अर्कामा अर्कालाई घुडा टेकाएर आफ्नो कुरा मात्र मनाउने अनि लाद्न खोज्नु जनताको भावना कुल्चनु जस्तै हो ।
आजभन्दा २३५ बर्ष अघि अमेरिकामा, अनि २०० बर्ष अघि स्वीजरल्याण्ड संघीय व्यवस्था लागु भएको हो । भारतमा ब्रिटिशले छोडेपछि भारतीय नेताहरू गान्धी, जवाहरलाल नेहरू मिलेर संघीय गणराज्य बनाए । अहिलेसम्म संघीय राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, स्पेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भेनेजुएला, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इथोपिया, क्यानाडा, जर्मनी, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना इत्यादि अनेकौं देशहरू छन् । संघीय राज्यहरू ठुला देश मात्र नभएर सेन्ट किट्स र नेभिस जस्ता ४०-५० हजार मात्र जनसंख्या हुने पनि छन् । संघीय राज्य निर्माण कसरी गर्ने सवालमा आफ्नो आफ्नो देशमा फरक धारले बनेका उदाहरणहरू पाईएका छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू क्षेत्रीय आधारमा संघीय बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि भाषिक तथा क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा जान बाध्य भए ।
kbs — Wed, 06/23/2010 - 18:59
विश्वका थुप्रै मुलुकमा उच्च नेपाली शानका साथ अनेक पटक फहराइएको राष्ट्रिय झण्डाको महत्व र गरिमालाई देशभित्र चाहिँ औपचारिकतामा सीमित गरिएको छ। मुलुकको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार र त्यस मातहतका अड्डामा ठड्याइने राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगबारे स्पष्ट नीति नहुनुले पनि उदासीनताको हद दर्साउँछ।